Weftigii Madaxweynaha Somaliland oo ku soo guryo-noqday Hargeysa, kana hadlay Aaskii Males Zanawi | KULMIYE
Weftigii Madaxweynaha Somaliland oo ku soo guryo-noqday Hargeysa, kana hadlay Aaskii Males Zanawi
Hargeysa, Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa galabta dalka dib ugu soo laabtay ka dib markii wefti uu Hoggaaminayay ay socdaal ku tageen dalka Itoobiya, halkaasi oo uu kaga qeyb galay aaskii Raysal wasaarihii hore ee Itoobiya. Madaxweyne Axmed Siilaanyo oo ka soo degay Madaarka Hargeysa ee Cigaal International waxa siday diyaarad khaas ah, waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland Md. C/Raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), Wasiirro, masuuliyiinta Ha’yadaha dawlada, Hoggaanka xisbiga KULMIYE iyo Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Baarlamaanka Wakiiladda iyo Guurtida.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud oo saxaafada ugu waramayay qolka nasashada ee madaarka Hargeysa, ayaa sheegay inay qaran ahaan ka qayb galeen aaskii Raysal wasaarihii hore ee Itoobiya Malas Zanawi, waxaanu tilmaamay inay dawlada Itoobiya iyo qoyskii Hoggaamiyihii hore ee dalkaasi u tacsiyadeeyeen una muujiyeen siday uga xun yihiin geeridiisa.
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu sheegay in dalka Itoobiya uu ka dhaxeeyo iskaashi qoto dheer oo saaxiibtinimo isla markaana uu halkiisii ahaan doonto cilaaqaadka labada dal.
Weftiga madaxweynaha waxa dawlada itoobiya ku qaabishay baratakool sare oo la mid ah kii Hoggaamiyeyaashii adduunka ka socday, waxaana la fadhiisiyay goobtii loo asteeyay madaxdii caalamka ka socotay.
Madaxweynuhu waxa uu madaarka Hargeysa salaam sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidammadda qaranka, waxaanu gacan qaaday masuuliyiintii soo dhaweysay.